Welcome to Waikiki (2018) [Complete] BS ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင့် လက်တလော အက်မင်တို့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်ပြီး ဟာသနဲ့အချစ်ဇာတ်လေးကို သရုပ်ဆောင်ကောင်းများစွာဖြင့် ရိုက်ကူးထားတဲ့ Welcome To Waikiki ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်....လက်တလော အတွဲ၃ ထွက်နေပြီဆိုပေမယ့် ကွာလတီစိတ်တိုင်းမကျသေးတဲ့အတွက်...အနည်းငယ်ကြာမြင့်ပါဦးမယ်ရှင့် အဲဒါကြောင့် အရှေ့မှာထွက်ထားတဲ့ အတွဲ၁ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က စီးရီးလေးကို မဖြစ်မနေကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်ရှင့် BS ကွာလတီဖြင့် အကောင်းမွန်ဆုံးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာကြောင့် စိတ်တိုင်းကျစေမှာပါရှင်... အညွှန်း.... 2018ထွက်ဒီကားလေးက တော်တော်ကိုရီရတာပါနော် အပိုင်းတိုင်း အပိုင်းတိုင်းကိုကြည့်ပြီးရီလိုက်ရတာပါဆို ဟာသကားကြိုက်သူတွေ အကြိုက်တွေစေမဲ့ Waikiki ပါနော် မင်းသား မင်းသမီးတွေကလဲ ကိုယ်တွေသိပြီးသားတွေပါ ဝိုင်ကီကီဆိုတဲ့ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလေးကို သူငယ်ချင်းသုံးယောက် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ကြတယ်.. အခြေအနေတွေကြောင့် စားစရာမရှိဘဝဖြစ်မယ့်ပုံကိုရောက်တော့မယ့် ဆဲဆဲမှာ ချစ်သူနဲ့လည်းပျက် အလုပ်လည်းပြုတ်တဲ့အပြင် ဟိုတယ်ကို ဘယ်က ကလေးလေးမှန်းမသိ ဘယ်သူလာထားသွားမှန်းလဲမသိ ကလေးအမေ အဖေကဘယ်သူမှန်းလဲမသိဖြစ်နေပြီး ယောကျာ်းလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးထိန်းဖို့က တော်တော်လေး တိုင်ပတ်နေရှာပါတယ်.... ဇာတ်လမ်းလေးက တော်တော်ကောင်းတာမလို့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦးရှင် Lee Yi-kyung Kim Jung-hyun Son Seung-Won Jung In-sun Go Won-hee တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးမှာ ဟာသတွေကြည့် ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်သလို အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးလည်းဖြစ်တာကြောင့် အပန်းဖြေ ကြည့်ရှုလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်.... Review & Translator ...
Suits (2018) [Complete] ချက်ဘောက်ကနေပြီးတော့ ဒီကားလေး မတင်ပေးသေးဘူးလား တင်ပေးမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေပါတယ်နော် လို့ပြောတဲ့အတွက် BS ဖန်တွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နောက်ကျနေခြင်းဟာ...ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်ကိစ္စလေးတွေရှိလို့ပါ ကဲအခုတော့ 1080p ကြည်တောက်ရှင်းလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့ ဒီဇာတ်ကားဟာ KBS2 Network ကနေ နိုင်ငံခြား Suits ဇတ်လမ်းတွဲကို အခြေခံပြီးတော့ Korea Version နဲ့ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ ဒီအထဲမှာ ပါတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကတော့ ဒါရိုက်တာရင်လို့ လူသိများတဲ့သရုပ်ဆောင်နဲ့ အခြားဝါရင့်သရုပ်ဆောင်သမားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် ယွန်ဝူးဟာ ဘာမဆို အတိအကျမှတ်သားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဦးနှောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ တစ်နေ့မှာတော့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ ထောင်ချောက်တစ်ခုမိခဲ့ပါတယ် အဆုံးသတ်မှာတော့ သူဟာ ကန်နဲ့ဟမ်တို့နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ရတော့မှာဖြစ်ပြီး ဒီရွေးချယ်မှုဟာ သူ့ဘ၀ကိုထာဝစဉ်ပြောင်းလဲစေတော့မှာပါ ကဲ..ကဲ..ဆက်လက်ကြည့်ရှ့လိုက်ပါဦးခင်ဗျာ ညီမလေး Pwint Phyu နဲ့ Bobby[BS] တို့က အပင်ပန်းခံပြီး ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ် Episode 1 (1.2 GB) Episode2(1.23 GB) Episode3(1.4 GB) Episode4(1.1 GB) ...
Clean With Passion For Now (2018) Complete ဒီတစ်ခါ BS ပရိသတ်ကြီးကိုအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့Korean Romance Serieလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်နော်… Dramaနာမည်လေးက”Clean With Passion for Now”လို့အမည်ရပါတယ်… ဒီDramaဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့အမည်တူနာမည်ကြီးWebtoonကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်…မင်းသားချောYoon Gyun Sangနဲ့Moonlightကားထဲကမင်းသမီးလေးKim You Jungတို့ကအဓိကပါဝင်ထားပါတယ်…သူတို့၂ယောက်ရဲ့အတော်ကြာမှပြန်လည်ရိုက်ကူးတဲ့Dramaလည်းဖြစ်ပါတယ်… ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့… Jang Sun Gyol(Yoon Gyun Sang)ဟာသန့်ရှင်းရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူဌေးဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းသန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေတတ်ပြီးကြည့်ကောင်းတဲ့သူပါ…သူဟာငယ်စဉ်ကတည်းကMysophobiaလို့ခေါ်တဲ့အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကိုကြောက်တတ်တဲ့ရောဂါရှိတဲ့သူမို့အမြဲသန့်ရှင်းနေတာကိုကြိုက်ပြီးညစ်ပတ်တာကိုကြောက်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်…တစ်နေ့Gil Oh sol(Kim You Jung)ဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကောင်မလေးဟာSun Gyolရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သမားဖြစ်လာပါတော့တယ်…Oh Solဟာတခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့မတူပဲအရမ်းညစ်ပတ်ပြီးဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့အတွက်လူချစ်လူခင်လည်းပေါတဲ့ကောင်မလေးပေါ့… ဒီလိုနဲ့ပုံစံလုံးဝမတူညီကြတဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ကိုလူချောသူဌေးနဲ့ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်အလုပ်သမားမလေးတို့တွေ့ကြပြီးဘယ်လိုတွေRomanceဆန်ကြမလဲဆိုတာတော့ဆက်သာကြည့်လိုက်ကြပါတော့နော်… ဒီDramaကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာ၊အဂါင်္နေ့ည၉နာရီခွဲ(KST)တိုင်းမှာJTBCရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်… Reviewed Credit to Ko Thit Lwin Translated by Aye Charm Encoded By Sai Wunna Episode 1 (725.21 MB) Episode2(542.96 MB) Episode3(579.34 MB) Episode4(476.37 MB) Episode5(489.91 MB) Episode6...
Just Dance (2018) Complete ကဲ ဒီတစ်ခေါက်လည်း BS ဖန်တွေအတွက်ဖြစ်ရပ်မှန် ကိုးရီးယား အကဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဆယ်ကျော်သက် ကလေးမလေးတွေကြည့် စုပြီးရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ ကလေးမလေးတွေက ချစ်စရာလည်းကောင်းသလို....ကျရာဇာတ်ရုပ်ကနေပြီးတော့ ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ သရုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်.... KBS2 Network ကနေပြီးတော့ အပတ်စဉ် Monday နဲ့ Tuesday တွေမှာ ပြသလျက်ရှိတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးပါ အပိုင်း ၁၆ ပိုင်းအထိ ပါဝင်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့ Series လေးတစ်ခုပါ ပြီးတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးက အသက် ၁၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ကြည့်ရှ့ဖို့မသင့်တော်ပါဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ် ဆိုတော့ 15+ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပေါ့ဗျာ ကဲ...ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဗျာ... ဟာ.....အဲ့လိုနော်...စိတ်ကောက်တဲ့လေသံနဲ့ မပြောနဲ့... ပရိတ်သတ်ကြီးရေ.... ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာ...လို့ပြော.... အညွန်း **** အသက်မွေးမှု အထက်တန်းကျောင်းက အငယ်တန်းကျောင်းသူဖြစ်တဲ့ ကင်ရှီအွန်းက သူ့ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀ကို စိတ်မချမ်းမသာခံစားရင်း စိတ်ပျက်မှုတွေနဲ့ပဲ ရှင်သန်နေပါတယ်။ အသက်မွေးကြောင်းအလုပ်ကို အကြံပေးဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ ဆိုးလ်မြို့က ကောလိပ်ကို တက်ချင်တဲ့ သူ့မျှော်လင့်ချက်ကို ထုတ်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ အကြံပေးခံလိုက်ရပါတယ် ဂျူဟိုက ရှီအွန်းတို့ကျောင်းရဲ့ အကအားကစားအသင်းကိုဦးဆောင်သူပါ အသင်းကိုပိတ်လိုက်ရတော့မယ် အခြေအနေကို သူရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ လာမယ့်ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်ဖို့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို သူစရှာပါတော့တယ် ရှီအွန်းက အသစ်တွေ့ထားတဲ့ ...
[email protected] (2018) Season3[Complete] ကဲ အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ [email protected] S3 ကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်. ကြားထဲမှာ နည်းနည်းလေး နောက်ကျသွားတာကိုခွင့်လွတ်ပေးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ဒီတစ်ခါ S3 ကိုတော့ Hulu နဲ့ Go90 ကနေ့ရိုက်ကူးပြီး AwesomenessTV ကနေထုတ်လွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်.... ခေတ်လူငယ်တွေ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ စီးရီးဖြစ်တာကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်.. အရင် S1 နဲ့ S2 ကို တင်ပေးထားပြီးသွားပါပြီ ကဲဒီအတိုင်းတွေမှာ အရင်တုန်းကလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲ Monkeymann အပြင် King_Cobra နဲ့ Mr.Empty ဆိုပြီး ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါတယ်.. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မိန်းကလေးတွေဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်း မိဘတွေကိုမတိုင်ချင်ကြဘူး ခေတ်လူငယ်တွေဆိုတော့ ကိုယ်တွေ့မှ ယုံကြတဲ့သူတွေ ဒီလိုနဲ့ အသစ်ပေါ်လာတဲ့ သူတို့ကို ဒုက္ခပေးဦးမယ့် သူတွေက ဘယ်လိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ အစီအစဉ်တွေချပြီး လုပ်ခိုင်းဦးမလဲ ဘယ်လိုမျိုး ရင်ဆိုင်ကြမလဲ ဒီအပိုင်းတွေမှာ စော်ချော်ချော်လေးတွေကို အသစ်ထပ်မံတွေ့မြင်ရဦးမှာပါ ဇာတ်လမ်းက စော်လေးတွေကိုကြည့်ရတာနဲ့တင်တန်နေပါပြီနော်..ငိငိ Episode 1 to 12 [370 MB Per Episodes ] ...
[email protected] (2018) Season3[Complete]
Larva Island (2018) Season 1 [Complete] ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ Netflix ကနေတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ Larva Island လေးကို မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Larva ဆိုလူတိုင်းသိသလို ကလေးတွေအကြိုက်အပြင်လူကြီးတွေပါ ကြိုက်တဲ့ ပိုးကောင်လေး နှစ်ကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီစီးရီးလေးဟာ တစ်ပိုင်းကို ၈မိနစ်သာ ကြာမြင့်ပြီး စုစုပေါင်း ၁၃ပိုင်းပဲရှိပါတယ်. ဒါကြောင့် BS က ၁၃ ပိုင်းလုံးကို တစ်ပိုင်းတည်းဖြစ်အောင် တည်းဖြတ်ထားပြီး မြန်မာစာတန်းထိုးဖြင့် ၁၃ ပိုင်းလုံးကို တစ်ခါတည်းကြည့်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်...ဒါကြောင့် စုစုပေါင်းကြာချိန်ဟာ ၁နာရီနဲ့ မိနစ်၅၀ ဖြစ်ပါတယ်.. ..1080p Web-Rip 6CH ဖြင့်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါဦးခင်ဗျာ ဘာသာပြန်ကတော့ ညီမလေး Yin Mar Oo ဖြစ်ပါတယ် Download All In One Episodes (1.57 GB)
Titans (2018) Season 1 [Complete] ကဲကဲ ကွာလတီအလန်းနဲ့ BS ရဲ့လက်ရာကိုတစ်ချက်မြည်းစမ်းကြည့်ပါဦး DC ကနေပွဲထုတ်လိုက်တဲ့ Titans တွေပဲဖြစ်ပါတယ်... Season 1 ပဲထွက်ထားပြီး ၁၁ ပိုင်းပါဝင်တယ် Netflix ကနေရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Web-Rip ပဲထွက်ပါတယ် BluRay ကလာမှာ မသေချာပါဘူး Dc universe ရဲ့​ပထမ​ခြေလှမ်းဖြစ်​တဲ့ Titans ထွက်​လာပါပြီ Titans ဟာ Dc comic ရဲ့နာမည်​​ကျော်​ Team တစ်​ခု ဖြစ်​တဲ့အပြင်​ မန်​မာနိုင်​ငံမှာလည်း Teen Tians series ကို လူ​တော်​​တော်​များများသိကြမှာပါ ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်းက​တော့ Batman ​လောင်းရိပ်​​အောက်​ကထွက်​လာတဲ့ Robin ရယ်​ Darkness ​တွေကြီးစိုး​နေတဲ့ Raven Starfire နဲ့ Beast boy တို့ Titans ဘယ်​လိုဖြစ်​လာမလိုဆိုတာ​တွေ့ရမှာပါ တခြား Dc character ​တွေလည်း အများကြီးပါလာမှာမို့ ဆက်​ဆက်​ကြည့်​သင့်​တဲ့ Series ပါ Spin off အ​နေနဲ့ထပ်​ထွက်​မယ့်​ series ​တွေလည်းကျန်​ပါ​သေးတယ်​ Review ဒီတစ်​ခုက​တော့ ကျ​နော်​တို့ကြည့်​ဖူးတဲ့ Tt ...
Midnight, Texas Season2Midnight, Texas Season2အားလုံးစောင့်စားနေတဲ့ Season2လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..... ဒီ Season2မှာ အရင်ကထက်ကိုပိုပြီးတော့ ကြမ်းပြထားတယ်... အကုန်လုံးကလည်း သူတို့ရဲ့ လွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့သွားကြတယ် အဲ့ဒါကတော့ အစွမ်းတွေကို စုတ်ယူနီုင်တဲ့ ပျောက်စေဆရာပေါ်လာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်.... သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်ကိုတောင်မှ ပုံမှန်လူပြန်ဖြစ်စေတဲ့ ပျောက်စေဆရာပါ.... အားလုံးဟာ... သူတို့မလိုချင်တဲ့ ဘ၀ကြီးမှာ နေရင်းနဲ့ မဒ်နိုက်မြို့ကို ကာကွယ်နေရတာ ငြီးငွေ့ဖွယ် ဖြစ်လာကြပြီ.... သူတို့လိုချင်တဲ့ မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေကို ပြန်အသက်သွင်းလို့ရပြီဆိုတာကို သိလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဖာသာ ကစပြီးတော့ သူ့ရဲ့ သမန်းကျားဘ၀ကို ပျောက်စေဆရာနဲ့ကုပြီး မဒ်နိုက်ကနေ အပြီးအတိုင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ် ဖာသာ ထွက်အသွားပြီး မကြာခင်မှာပဲ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ... မြင်ဖူးသမျှထဲမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင် ထိတ်လန့်လာကြပါတယ်.. မန်းဖရက်ကလည်း မဒ်နိုက်မြို့ကို ကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ ရှေ့ဖြစ်ဟောကလည်း မန်းဖရက်နဲ့တခြားစီပဲဖြစ်လာမလား သူပဲ အားလုံးကို ကယ်နိုင်သွားမလား သူ့ကို ၀င်ပူးနေတဲ့ ၀ိဥာဉ်ကိုပဲ နှင်ထုတ်နိုင်မလားဆိုတာကိုတော့....... Season2ကိုကြည့်ချင်လှပြီဆိုတာနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်... 1080p Web-dl 6CH ဖြင့်အကြည်လင်ဆုံးကြည့်ှရှုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ Episode 1 (685.04 MB) Episode2(683.92 MB) Episode ...
Reverie (2018) Reverie (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး ****************************** [Episodes - 1 to 5] Google Users - 94% Rotten Tomatoes - 62% IMDb - 6.7/10 Virtual Reality တွေရဲ့ နည်းပညာပိုင်းဟာ နောက်ပိုင်းမှာ အလွန်အင်မတန်ကိုမှ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာကြပါပြီ ယခုဆိုရင် VR ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဂိမ်းကစားနိုင်တာတွေ လက်တွေ့မှာမဖြစ်နိုင်တာတွေကို စိတ်ကူးထဲမှာ တကယ်ဖြစ်နေသလိုမျိုးအရသာကို ခံစားစေရမယ့် နည်းပညာတွေပဲဖြစ်တယ်... ဒီနည်းပညာတွေဟာ မသမာသူတွေရဲ့ လက်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့ရင် မတွေးဝံ့စရာပါပဲ...အဆုံးအစွန်အထိဆိုရင် အသက်အန္တရာယ်ကိုတောင် ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်...လူသားတွေတီထွင်ထားတဲ့နည်းပညာဟာ...လူသားတွေကိုပဲပြန်သတ်တော့မှာလား.. ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ 2018 ကမှရိုက်ကူးထားတဲ့ Drama, Sci-Fi, Thriller အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ လက်ရှိနည်းပညာတိုးတက်ဆဲနဲ့ တိုးတက်နေပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ပုံစံမျိုးရယ်..... သဘာဝတရားကြီးဟာ...လုံးဝကိုနည်းပညာဆန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.... ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေဆိုတာ ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါ သဲထိတ်ရင်ဖိုဖိုနဲ့ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေကိုလည်း မြင်ရတွေ့ရမှာပါ လက်ရှိ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဒီလိုဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို ကြည့်ရှုသင့်တယ်ထင်လို့ BS ကနေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ...လူတွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်တာနဲ့ လက်တွေ့ကို မခွဲခြားတတ်တော့တဲ့သူတွေလိုဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်... မမကြီးကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဒီနေရာမှာ ...
Longing Heart (2018) လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စီအချစ်ဦးဆိုတာတော့ ရှိတတ်ကြမှာပါနော် ... ထို အချစ်ဦးနဲ့ ချစ်ခွင့်ရသော်ရှိ , မရသော်ရှိ တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ " အချစ်ဦး " ဆိုတာ နှလုံးသားရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးသော နေရာတစ် နေရာကနေ ရှိနေတတ်ကြတာချည်း ... ဒါပေမဲ့လည်း " အချစ်ဦး " ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရလေးအတိုင်း ပထမဆုံးချစ်ခဲ့ရတဲ့သူပေါ့ ... လူတိုင်းမှာ " အချစ်ဦး " ဆိုတာရှိသလို လူတိုင်းနီးပါး တော်တော်များများကလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထို " အချစ်ဦး " နဲ့ ခွဲခွာခဲ့ရတာများတယ် ... ကိုယ့်ဘက်က မှားခဲ့တာတွေရှိနိုင်သလို ... သူ့ဘက်က မှားခဲ့တာတွေလည်း ရှိနိုင်တာပဲ ... အကယ်၍များ ထို " အချစ်ဦး " ရှိတယ့် အတိတ်ကာလတစ်ခုကို ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပြီး ပြန်ပြင်ဆင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ... သင်တို့ ဘာတွေဘယ်လို ပြင်ဆင်ကြမလဲ ? ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ - ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာတဲ့ အထိ အချစ်ဦးကို မေ့ဖျောက်လို့မရနိုင်တဲ့ ကန်ရှင်းဝူး ဆိုတဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက်အကြောင်းပေါ့ ...
What’s Wrong With Secretary Kim (2018) ဥစ္စာပေါ ရုပ်ချောပြီး ထက်မြက်သလောက် အတ္တကြီးပြီး ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်သိတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းသမား ဒုဥက္ကဋ္ဌ Lee Yeong Joon ရဲ့ ဘေးမှာ ၉ နှစ်တာလုံးလုံး သစ္စာရှိရှိ ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အတွင်းရေးမှူးမလေး Kim Mi Soက သူ့သူဋ္ဌေး ဒုဥက္ကဋ္ဌရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို စိတ်ကုန်လာပြီး အလုပ်ထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးနောက် ရယ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အထင်လွဲမှုလေးတွေကို ရိုမန့်ဆန်ဆန်လေး ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းတင်းကျပ်တဲ့ အလုပ်ခွင်မှာ ၉နှစ်တာကြာပြီးနောက် သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး တိုးတက်လာနိုင်မလား။ ဒါမှမဟုတ် တကယ်ပဲ အလုပ်ထွက်လိုက်မလားဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါတော့နော်။ ~Review Credit Quality – HDTV 1080p Running Time – 1h @episode Format – mp4 Genre – Comedy, Mystery, Romance Translator – Burmese Subtitle Team Encoded By – Burmese Subtitle Team Episode 1 (900MB) Episode ...